मनोरंजन Archives - Page3of5- Taja Report
July 20, 2018 Comments Off on सपनामा यौन सम्पर्क गरेको देख्नु भयो भने त्यो सुभ असुभ के होला ? जानी राख्नुहोस
सपना सबैले देख्छन् । यो धुव्रसत्य कुरा हो । हाम्रा बुढापाकाले सपनाबारे भन्ने गर्छन्, ‘तिमीले देखेको यो सपना शुभ हो वा यो अशुभ ।’ केही सपना यस्तो देखिन्छ, जो सेक्ससँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यो आफ्नै [ पुरा पढ्नुहोस ]
बजारमा आइपुग्यो शाकाहारी कण्डम, के–के छ फाइदा ? जानी राखौ
July 18, 2018 Comments Off on बजारमा आइपुग्यो शाकाहारी कण्डम, के–के छ फाइदा ? जानी राखौ
बजारमा विभिन्न खालका कण्डम पाइन्छन् । युवा युवतीले ती कण्डमलाई खपत पनि गरिरहेका छन् । तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । बजारमा अब ‘शाकाहारी’ कण्डम पनि पाइनेछ । सस्टेन नेचुरल ब्रान्ड नामबाट ‘शाकाहारी कण्डम आएको हो [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 16, 2018 Comments Off on नेपाली पोसाकमै परिवारसँगै हेर्न नसकीने ९ तस्विर, आखिर को हुन् ज्योति मगर ?
नेपाली पोसाकमै परिवारसँगै हेर्न नसकीने ९ तस्विर, आखिर को हुन् ज्योति मगर ? काठमाडौ । ज्योति मगर अस्लिल हर्कतले चर्चा जमाई राख्ने एक पात्र हुन् । उनका अनेकौँ हर्कतहरु छन् । कहिले मदिराले मातेर देखाएको [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 16, 2018 Comments Off on यी ९ चर्चित कलाकार जसले डेब्यु चलचित्रबाट पाए पारिश्रमिक….. राजेश हमालको १३ हजार, दयाहाङ ३० हजार, अरुको कति ?
कलाकारले महँगो पारिश्रमिक लिन्छन् भन्ने तथ्य अहिले बजारमा ‘हट केक’ नै भएको छ । फलानो नायक यति महँगो वा फलानी नायिका यति महंगी भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर अहिले निकै महँगो मानिएका कलाकारको पहिलो [ पुरा पढ्नुहोस ]
हट सीनको सुटिङ्ग गर्दा आफुलाई नियन्त्रण गर्न नसकेका बलिउड अभिनेता र अभिनेत्री (तस्विर सहित)
July 7, 2018 Comments Off on हट सीनको सुटिङ्ग गर्दा आफुलाई नियन्त्रण गर्न नसकेका बलिउड अभिनेता र अभिनेत्री (तस्विर सहित)
बलिउड चलचित्रमा रोमान्टिक सिनहरु रहने गर्छन् भने यस प्रकारको कामुक सिनहरुलाई दर्शकहरुले पनि मन पराउने गर्छन्। यस प्रकारका दृश्यहरु चलचित्रमा धेरै मन पराइने गरिन्छ भने चलचित्र हिट हुनमा यस्ता सिनहरुको समेत हात हुने गर्छ। चलचित्रमा [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 7, 2018 Comments Off on अर्चना पनेरुका यी दुर्लभ तस्वीर – नहेर्नेको गएन त आधा जिन्दगी खेर
देशकै जानेमाने पोनस्टार तथा स्वघोषित नेपाली माटोकी सन्नी लियोन यानकी अर्चना पनेरुका बिकिनि र न्युड त बजारमा यत्रयतत्र सर्वत्र छन्। तर आज हामीले उनका यस्ता तस्बीर यहाँ देखाउदै छौ जुन हेर्न मात्र पनि निधारमा ३ [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 6, 2018 Comments Off on डिभोर्स गरेका २१ नेपाली सेलिब्रेटीहरु ! अहिले के गर्छन ?
नेपाली चलचित्र वृत्तमा श्रीमान श्रीमतीबीचको खटपटको खबर खुबै सुनिन्छन् । यतिसम्म की सम्बन्ध विच्छेद हुनु र जोडिनुलाई खासै अनौठो मानिँदैन, यहाँ । बहुविवाह गर्ने चलचित्रकर्मीको लामो पङ्क्तिले यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । यो सवालमा नायक–नायिका [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 5, 2018 Comments Off on अनमोलदेखि साम्राज्ञीसम्मः कसको स्टार पावर कति ?
केही हप्ताअगाडि मात्र रिलिज भएको एक चलचित्रका निर्माता आफ्नो चलचित्रले नाफा कमाउनेमा ढुक्क थिए । आफ्नो चलचित्र चलाउने स्टाइल नै फरक भएको र चलचित्र पनि बबाल बनेको भन्दै उनी दंग देखिए । तर, चलचित्र चलेको [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 4, 2018 Comments Off on यी अभिनेत्रीलाई मन्चमा लाज छोप्न धौधौ, यस्तो बिजोक अवस्थाको फोटो सार्बजनिक (फोटो सहित)
ग्ल्यामर वल्र्डमा अनेक चर्चा–परिचर्चा हुनेगर्छ । धेरैजसो चर्चा सेलिब्रेटीको लभ लाइफ, सेक्स स्क्यान्डल आदि बिषमा हुनेगर्छ । कहिले उनीहरुको विवादस्पद बयानले हंगामा मच्याउँछ । कहिले लाजलाग्दो पहिरनले उत्पात मच्याउँछ । सेलिब्रेटी पनि यस्तो चर्चाकै गोलचक्करमा [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 3, 2018 Comments Off on गलत खबरकै कारण यी कलाकारले खाए खानु सम्मको गाली
साच्चै नै हो मानिसहरुमा पोजिटिभ भन्द नेगेटिभ कुराहरुमा नै बिक्ने गर्छ चाहे त्यो खबर होस या त फेरी गीतसंगित नै किन नहोस । यस्तै चीजहरुको बाहुल्यता बढिरहेको समय सेलिब्रेटीहरु यस्ता नेगेटिभ र गलत खबरहरुको शिकार [ पुरा पढ्नुहोस ]
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं । (539)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (432)
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (303)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (253)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (186)
म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ (133)
जहाँ केटीहरु विवाह गर्न केटा नपाएर तड्पिन्छन [भिडियो हेर्नुहोस ] (123)